Efa nahazo Nifandray ny tantara, kanto, sy ny kolontsaina any Bruxelles ary ianareo dia vonona ny hijery ny tanàna ivelan'ny sisintany izao. Soa ihany, misy ihany koa ny maro mba hijery lavitra ao anatin'ny iray andro avy any Brussels. Loatra izany, fa efa nanapa-kevitra…
Ny faritra Normandie Faritany amin'ny faritra avaratrandrefan'i Frantsa ary dia somary fohy diany niala Paris. Izy io dia malaza Travel toerana ho an'ny maro amin'ireo izay te-hiaina ny maha-Avaratra Frantsa. -Normandie, izany rehetra izany dia manana, avy amin'ny…
Traveling amin'ny faritra samihafa eto amin'izao tontolo izao irery no afaka ho traikefa manazava sy mampientam-po. Na dia zavatra ataonao amin'ny fotoana rehetra, na indray mandeha ao anatin'ny androm-piainany diany mba hanitarana ny faravodilanitra, Travel Afaka Manova ny Fiainanao. Maro ny olona amin'izao andro izao misafidy…